SUSTA NEPAL:: भ्रष्टाचारीकाे फाइल तामेलीमा राखेबापत अख्तियार प्रमुखलाई पदक दिँदा जनताले के पाए ? : सांसद कँडेल SUSTA NEPAL:: भ्रष्टाचारीकाे फाइल तामेलीमा राखेबापत अख्तियार प्रमुखलाई पदक दिँदा जनताले के पाए ? : सांसद कँडेल
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले संविधान दिवसकाे अवसरमा वितरण गरिएकाे पदकलाई लिएर प्रश्न गरेका छन् । सनणदसक रूयत जस्ता केहशि राम्राे व्यक्तिले पदक पाएपनि त्याे सँगै खराब व्यक्तिहरूले पनि पदक पाएकाे उनकाे टिप्पणी छ । ठुला भ्रष्टाचारका फाइल तामेलीमा राखे बापत अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान अायाेगका अवकासप्राप्त प्रमसख आयुक्त नवीन घिमिरेलाई पदक दिइएकाे उनले प्रश्न उठाएका छन् ।